Impembelelo yokuwa kweAfghanistan kushishino lwezoKhenketho lweHlabathi kunye noKhenketho
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zeManyano » Impembelelo yokuwa kweAfghanistan kushishino lwezoKhenketho lweHlabathi kunye noKhenketho
Iindaba eziQhekezayo zaseAfghanistan • Iindaba zeManyano • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • LGBTQ • iintlanganiso • iindaba • abantu • Cinezela iZaziso • Ukwakha kwakhona • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Inethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi ixhalabile ngemeko yangoku e-Afghanistan. Umongameli we-WTN uGqirha uPeter Tarlow uyinkokheli yokuqala yombutho wezohambo enikezela ngovavanyo lokuwa kweKabul kunye nokuthathwa kweTaliban eAfghanistan kuya kwenza kukhenketho lwehlabathi.
Inethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi UMongameli uGqirha Peter Tarlow yingcali yehlabathi kushishino lokhenketho nokhenketho kwaye ulinganisa ukuba iKabul iwele ezandleni zeTaliban njengenkxalabo enkulu kushishino lwezohambo nokhenketho lwehlabathi kunye namalungu eNethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi kumazwe ayi-128.
Alithandabuzeki elokuba izazi ngembali zizakuphikisana ngemigaqo-nkqubo yase-US nase-Yuropu ukuya e-Afghanistan kumashumi eminyaka ezayo. Amazwe amaninzi azamile ukoyisa iAfghanistan, ukusuka kumaTshayina amandulo ukuya kwiBritane, ukusuka kumaRussia ukuya kumaMelika.
Kuzo zonke iimeko, iAfghanistan ihlale kwindawo yayo "njengamangcwaba obukhosi". Ukuwa kweKabul kutshanje kukuphela kokungaphumeleli kweNtshona kunye nakwimbono ye-geo-politiki, le mpembelelo yoyiso iya kubonakala kwiminyaka okanye kumashumi eminyaka ezayo.
Ayimangalisi nakubani into yokuba iimpembelelo zeziganeko kwezi ntsuku zimbalwa zidlulileyo, ukuqala nge-14 ka-Agasti inokuba nefuthe nakwilizwe lezokhenketho ngeendlela ezingekaqondwa okanye ezingafakwanga ngamagosa oshishino lokhenketho.
The owayesakuba ngumongameli wase-Afghanistan took imali eninzi kangangoko phambi kokuba abaleke ilizwe lakhe, kunye neeyure ngaphambi kokuba iTaliban ikwazi ukumnqanda. Yena nosapho lwakhe ngoku bakhuselekile e-Abu Dhabi kwaye bamkelwe e-United Arab Emirates, eyona ndawo iphambili yokuhamba kunye nokhenketho kwiindawo zoncedo. Oku ngoku kutshabalalisa ngokupheleleyo ubuthathaka kukhuseleko lwehlabathi lasentshona olwakhile eAfghanistan.
Ukanti ngaphandle kwento yokuba kuninzi esiza kuyidinga ukuyifunda malunga ne-Afghan debacle, kubalulekile ukuba iingcali zopolitiko, amagosa omgaqo-nkqubo woluntu, kunye noososayensi bezokhenketho bakhulise ukuqonda malunga nokuba ilizwe elincinci nelincinci "lidlale njani, kwaye inokuthi kwixa elizayo iqhubeke nokudlala, indima enkulu kangaka kwinqanaba lehlabathi kunye nakwezokhenketho lwehlabathi.
Ukuqonda ukuba kuthetha ukuthini ukulahleka kweKabul, kufuneka sihlolisise ilizwe ngokwembono yendawo kunye nembali.
Abathengisi bezindlu bahlala becaphula into yokuba kukho amagama amathathu kuphela amisela ixabiso lepropathi. La magama "yindawo, indawo kunye nendawo" Ngamanye amagama kwilizwe lendawo yendawo yokuhlala yiyo yonke into.
Kwinqanaba elikhulu singathetha into efanayo malunga neentlanga.
Isiphelo sesizwe esininzi simiselwa yindawo ekuyo emhlabeni. Umzekelo, amazwe aseMelika, kunye ne-United States ngokukodwa, babenethuba elikhulu lokuba bahlukaniswe neYurophu nolwandle.
Ukunqongophala kwemida yobundlobongela eMelika kuye kwathetha ukuba i-US ibinokunandipha into esinokuthi “bubuqaqawuli obubodwa”.
Imida yayo yendalo, eyahlukileyo kumazwe amaninzi aseYurophu ahlala kwimida emininzi kufutshane, ayikhange ikhusele amazwe amaninzi aseMelika kuhlaselo lomkhosi kodwa de kwaqala uCovid nakwizifo zonyango.
Nangona inkulungwane yamashumi amabini ngasekupheleni kwenkulungwane yamashumi amabini ananye ikubonile ukwehla kwale geographic ngenxa yokhenketho oluninzi kunye nolawulo lwangoku lwe-US lokungafuni ukukhusela umda osemazantsi e-US, lo mgaqo usasebenza nangoku. ICanada ibe nethuba lokuba nomda omde woxolo kunye ne-US evumele iCanada ukuba ichithe izibonelelo ezincinci kwezomkhosi.
I-Afghanistan yimeko eyahluke mpela. Olu hlanga luvaliweyo lusentliziyweni yoko ababhali-mbali bakubiza ngokuba '' ziindlela zesilika '.
Ukusa kumgangatho omkhulu la ngamazwe asembindini wehlabathi, kwaye kula mazwe kuye kwenzeka kakhulu kwimbali yezoqoqosho lwehlabathi. I-Afghanistan ayihlali nje embindini weendlela zesilika, kodwa isizwe sikwatyebe kakhulu kwizimbiwa.
Ngoku ka UPeter Frankopan Icaphula kuvavanyo lwe-Geological yase-US ukuba i-Afghanistan ityebile kwintsebenziswano, i-iron, i-mercury kunye ne-potash.
Isizwe sineendawo ezinkulu ezigcinwe kwinto eyaziwa ngokuba "ngumhlaba onqabileyo".
La "mhlaba" aquka i-lithium, i-beryllium, i-niobium kunye ne-copper. Ngokuwa kweKabul ezi zimbiwa zinqabileyo kunye nezinto ezixabisekileyo ngoku zisezandleni zeTaliban kwaye ezi zimbiwa zinokwenza i-Taliban ityebe ngokumangalisayo.
Akufanele simangaliswe ukuba i-Taliban ayisebenzisi lo moya woqoqosho njengendlela yokuqhubela phambili iinjongo zabo ezichaziweyo zokudala i-Califate ye-Islamic emhlabeni jikelele.
Bambalwa abantu baseNtshona kunye nabambalwa abasemagunyeni kwezokhenketho abaliqondayo ixabiso lale mihlaba inqabileyo kunye neeminerali kunye nenyani yokuba i-China ikwanazo izixa ezikhulu zezi zinto. Sisebenzisa ezi zinto kuyo yonke into ukusuka kwimveliso yekhompyuter ukuya kwi-talcum powder.
Olu lawulo lweeminerali ezinqabileyo nezifunekayo kunye nomhlaba onqabileyo kuthetha ukuba umanyano lweTaliban-China luba ngumceli mngeni omtsha kumazwe asentshona kwaye ngokwandisa amashishini abo okhenketho.
Ukuwa kukaKabul kukwanamaxabiso ezopolitiko.
IHelikopta yokuqala yaseRashiya eyi-100% eyilwe ngokweDijithali iThatha...
Ukuvalwa okutsha kwe-COVID-19 eNetherlands kuya kuba okokuqala ...
Anurag yadav uthi:
Agasti 20, 2021 kwi-14: 47
Kukho ingxelo yezopolitiko engachazwanga kweli nqaku kunalo naliphi na ukukhanya kwinto ithembisa isihloko.
UPaul Rogers uthi:
Agasti 19, 2021 kwi-14: 13
Ingcinga ecaphukisayo kunye nokuchazwa kakuhle, Peter. Ekuhambeni kwe-PM nayo yonke loo mali, kwelinye icala ndiyavuma lihlazo elipheleleyo kodwa kwelinye icala kungcono ukuba unalo (kwaye wonke umntu uyazi ukuba unalo kwaye ulibeka kuye uxanduva) kunokuba iTaliban inayo, ngokuqinisekileyo?
UAshraf El Gedawy uthi:
Agasti 19, 2021 kwi-07: 55
Yonke imibuliso kwingcali yezokhenketho eyaziyo nenobuzaza kweli nqaku lihle kangaka lokuchaphazela ukuwa kwe-Afghanistan ezandleni zeTaliban, ephakamisa isiqubulo se-Islam malunga nokuhamba kwezokhenketho kunye nohambo lwamanye amazwe.
UDeepesh Gupta uthi:
Agasti 19, 2021 kwi-00: 18
Ewe, ukuba awukwazi ukugcina indlu yakho ikwimeko efanelekileyo kwaye ukhohlakele uThixo akazukukunceda… ..
Kwakungekho njongo, akukho mkhosi, kungekho nkokheli. Kuya kufuneka ulwe eyakho idabi kunokuba usole abanye. Ungavumela ixesha elingakanani ukuba ubekho kwilizwe lakho.